सरकारले सहयोग र समन्वय नगरे उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
सरकारले सहयोग र समन्वय नगरे उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी
समयमै बजार पठाउन नसक्दा करोडौं मूल्य बराबरका वस्तुको प्रयोग मिति सकियो
जेष्ठ ६, २०७७ राजु चौधरी
काठमाडौँ — गत चैत ११ देखिको लकडाउन जारी छ । यो तत्काल टुंगिने छाँट छैन । लकडाउनकै अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो । तर केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन सकेन । केन्द्रमै रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच समेत समन्वय हुन सकेन । यसले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन अन्योल बढाएको बढायै छ ।
‘उद्योग मन्त्रालयले उद्योग चलाऊ भन्छ, गृहले नखोल भन्छ । जिल्लामा स्थानीय प्रशासनबीच पनि समन्वय हुन सकेको छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक उद्योग पनि ४० प्रतिशतभन्दा चल्न सकेनन् ।’ सरकारले समन्वयकारी भूमिका नखेल्दा समस्या भएको उनले बताइन् । समन्वय अभावकै कारण गोदाममा रहेका वस्तु समयमा बजारमा पठाउन नसकिएको र यसले करोडौं मूल्य बराबरका सामानको उपभोग्य मिति सकिँदा आफूहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले भने ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र त्यसमा कसैले अवरोध गर्ने कुरा नआउने प्रस्ट्याए । केही स्थानमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समन्वय गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘हुरी बतास, नाकाबन्दीलगायतभन्दा अहिलेको अवस्था फरक छ । धेरै रिस्क लिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा वातावरण मिलेको छैन । कर्मचारी आवतजावत र कच्चा पदार्थलगायतको ढुवानीमा समस्या भएको छ । पसल खुलेका छैनन् । तर त्यसमा हामीले समन्वय गरिरहेका छौं ।’
सबैभन्दा बढी उद्योग तराई क्षेत्रमा छन् । कोरोनाको प्रभाव पनि यसै क्षेत्रमा बढी छ । जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न थप कठिनाइ भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । महासंघका अनुसार लकडाउनले समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रीय आर्थिक संकट परेको छ । ‘महामारीका कारण मुलुकले जीडीपीको ४/५ खर्ब नोक्सानी बेहोरिसकेको छ । लकडाउन अझै थपिँदै गए स्थिति थप भयावह हुने निश्चित छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘उद्योग व्यवसाय डुब्न नदिऔं । सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राख्न तत्काल आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरोस् ।’
उद्योगधन्दा बन्द हुँदा र अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुग्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको महासंघको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रमले समेत आफूहरूका समस्या सम्बोधन नगरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत योगदान रहेको र ३५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको उद्योग व्यवसायलाई कोमामा जानबाट बचाउनेतर्फ कुनै ठोस कार्यक्रम नआउँदा हामी अत्यन्त दु:खित छौं,’ राणाले भनिन् ।
बैंकहरूबाट ब्याज तथा किस्ता तिर्न ताकेता आउने गरेको, घर भाडा, जरिवानामा समस्या रहेको, ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाका विषयमा हालसम्म स्पष्ट व्यवस्था नआउँदा थप अन्योल बढेको महासंघले जनाएको छ । उद्योगी व्यवसायीसँग सञ्चालन पुँजीको अभावलगायतको समस्या तत्काल सम्बोधन नभए उद्योगीहरू सडकमा आउन बाध्य हुने महासंघको चेतावनी छ ।
‘उद्यमी व्यवसायीहरू गर या मरको अवस्थामा पुगेका छन्,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘हामीले सरकारसँग राहत मागेका होइनौं, सहयोग मागेका हौं । बजेटमार्फत हाम्रा माग सम्बोधन नभए उद्योग बन्द गरेर सडकमा उभिन बाध्य हुन्छौं ।’ लकडाउनकै कारण ऋण तिर्न नसकेर केही व्यवसायी आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताइन् ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले हस्तक्षेप नगरे घरेलु तथा साना र मझौला उद्योग ध्वस्त हुने दाबी गरे । ‘जसले अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशत धानेको छ, २० लाखलाई रोजगारी दिएको छ, अहिले त्यही वर्ग समस्यामा परेको छ,’ उनले भने, ‘ती उद्योगहरूलाई सरकारले हेर्नुपर्छ ।’
महासंघका अनुसार कम्तीमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाइनुपर्छ । एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, व्यवसायका लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले बेहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहे र बन्द गर्न चाहे विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ । ब्याज घटाउने सन्दर्भमा बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको राज्यमन्त्री दुगडले बताए ।
उद्यम चलाउन उद्योग र वाणिज्यको पास
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०७:१९
थपिए ८० संक्रमित : एउटै गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनका ५९
नरैनापुरमा मात्रै संक्रमित ६८, बाँकेमा संक्रमित संख्या ९३
जेष्ठ ६, २०७७ ठाकुरसिंह थारु, रुपा गहतराज
नेपालगन्ज — कोभिड–१९ का संक्रमित सोमबार ८० जना थपिएका छन् । तीमध्ये बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका मात्रै ५९ जना छन् । मुलुकभरमा अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि भएका ३ सय ७५ जनामध्ये २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । नरैनापुरमा सोमबार संक्रमण देखिएका सबै क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू हुन् । यसअघि यो गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमै बसेका ९ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । तीमध्ये १ जनाको आइतबार बिहान मृत्यु भएको थियो ।
संक्रमित धेरै देखिन थालेपछि नरैनापुर गाउँपालिकालाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सोमबारदेखि सिल गरिएको छ । गाउँपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टाइनबाट शनिबार संकलित १ सय ९२ जनाको थ्रोट स्वाब भेरी अस्पतालको प्रयोगशालमा परीक्षण गर्दा सोमबार ५९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । जिल्लामा संक्रमितको संख्या ९३ पुगेको छ ।
गाउँपालिकाका संक्रमित र मृत्यु भएका युवक कोभिड–१९ महामारीपछि भारतका विभिन्न सहरबाट फर्किएकाहरू हुन् । उनीहरूलाई गत वैशाख ३० मा सीमाबाट उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । धेरै जना सीमामा अलपत्र परेपछि स्थानीय विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो ।
चिकित्सकले एउटै स्थानीय तहमा धेरै जनामा संक्रमण देखिएपछि अवस्था भयावह बन्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले यहाँ समुदायमा संक्रमण फैलिएको घोषणा गरेको छैन । तर बाँकेमा कोभिड–१९ संंक्रमण समुदायमा फैलिएको छ । ‘कम्युनिटी ट्रान्समिसनको घोषणा डब्लूएचओले गर्ने हो,’ भेरी अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डा. राजन पाण्डे भने, ‘तर यहाँ समुदायमा संक्रमण भइसकेको देखिन्छ । अझै भयावह अवस्था आउन बाँकी छ ।’
डा. पाण्डेले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएकाले संक्रमण व्यापक भएको बताए । भारतबाट घर फर्किनेहरूको संख्या थपिँदै गएपछि गाउँपालिकालाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । अहिले नरैनापुरमा १३ वटा क्वारेन्टाइन स्थल छन् । तिनमा भारतबाट फर्किएका ७ सय १८ जना छन् । ‘क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गरिएको भए यस्तो भयावह अवस्था आउने थिएन । हामीसँग व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउन प्रशस्त समय थियो । तर त्यसो हुन सकेन,’ डा. पाण्डेले भने, ‘क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने कोरोनासँग अझै पनि लड्न सहज हुन्छ ।’
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मापदण्ड ०७६ अनुसार १ सय जना राखिएको क्वारेन्टाइनका लागि एमडी/एमपीएच कम्युनिटी मेडिसियन, मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य परिचारिका, प्यारामेडिक्स, ल्याब, फार्मसिस्ट, चौबिसै घण्टा एम्बुलेन्स र त्यसका लागि तालिमप्राप्त प्यारामेडिक्स, चालक, सफाइ सुपरीवेक्षक र ५ जना सफाइ कर्मचारी चाहिन्छ । तर जिल्लाका क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुसारका छैनन् ।
भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. प्रकाश थापाले संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकाले उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने ठाउँकै अभाव देखिएको बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मीको चुस्त व्यवस्था गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘नरैनापुरको हकमा त्यहाँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिक्छ ।’
डा. थापाले संख्या बढ्दै गएकाले उचित सुरक्षा दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण भएको बताए । ‘तत्काल परीक्षण बढाएर संक्रमित र अन्यलाई छुट्याएर राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिरामी भए तुरुन्तै अस्पतालसम्म ल्याउने पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ ।’ नरैनापुर नेपालगन्जबाट ३५ किलोमिटर टाढा रहेको छ ।
स्थानीयका अनुसार भारतबाट आएका व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसे पनि समुदायको सम्पर्कमा रहेकाले चिन्ता बढेको छ । भारतबाट आएकाको झोलालगायतका सामग्री परिवारले घर लगिसकेका छन् । त्यसरी ल्याएका सामान सेनिटाइजिङ गरिएको छैन । परिवारका सदस्य खाना र खाजा लिएर दिनहुँ क्वारेन्टाइन पुग्छन् । जसले गर्दा समुदायमा संक्रमण पुग्ने चिन्ता बढेको छ । नरैनापुर–५ का वडाध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्यले भने, ‘यहाँको अवस्था भयावह छ । महामारीको काम गरेको अनुभव छैन । सबै चिन्तामा छन् ।’
सीमाबाट मान्छे आउने क्रम अझै नरोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले बताए । ‘नरैनापुर कोरोना संक्रमणको रेड जोन भएकाले त्यहाँको व्यवस्थापनबारे छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सीमामा आएकालाई अहिले उद्धार गर्ने अवस्था छैन ।’
मृत्यु भएपछि दु:ख परेको घरमा आफन्त र छिमेकी पुग्छन् । तर कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका यहाँका २५ वर्षीय युवकको घरमा कोही पुगेका छैनन् । जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक व्यक्ति परिवारका सदस्यसित टाढाबाटै कुराकानी गरेर फर्किएका छन् । गाउँका सर्वसाधारण घरबाट निस्किएका छैनन् ।
नरैनापुर–५ स्थित घरमा युवकका बुबा–आमा, पत्नी र छोराछोरी उनलाई सम्झिँदै रोइरहेका छन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले ती युवक मजदुरी गर्न भारत गएका थिए । ६ महिना मुम्बई बसेर उनी वैशाख ३० गते सीमामा आएका थिए । ३१ वैशाखबाट क्वारेन्टाइमा बस्न थाले । छोरो आएको थाहा पाएर बुबाआमा भेट्न पुगेका थिए । १४ दिन बस्नुपर्ने भएकाले परिवारले पनि अनुरोध गरे । ती युवकले शनिबार खाना खाएर सुत्ने बेला राति १० बजे पत्नीलाई फोन गरेका थिए । उनले ‘खाना खाएर सुत्न लागेको छु’ भनेका थिए । आइतबार ४ बजे क्वारेन्टाइनबाट कसैले घरमा ‘उनको अवस्था ठीक छैन, झाडाबान्ता भइरहेको छ’ भनेर फोन गरेका थिए । ‘४ बजे बिमारी भएको मान्छेलाई ६ बजेसम्म उपचार गरिएन,’ युवककी श्रीमतीले भनिन् । स्थानीयले २५ वर्षीय ती युवकको मृत्यु उपचार नपाएर भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
युवकको मृत्यु भएपछि नरैनापुरको भोज भगवानपुरको दीपेन्द्र प्राविको क्वारेन्टाइनमा रहेका ३८ जनालाई जय किसान माविको क्वारेन्टाइनमा सारिएको छ । ‘जय किसान माविमा यसअघि नै ६० जना थिए । दीपेन्द्र प्राविबाट आएकालाई टेन्टमा राखिएको छ,’ नरैनापुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहम्मद मोइद खानले भने ।
कपिलवस्तु १५ दिन सिल
कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासनले आगामी जेठ २० गतेसम्म जिल्लालाई सिल गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले लकडाउनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि संक्रमित बढेसँगै गत वैशाख २९ गतेदेखि सोमबारसम्म जिल्ला सिल गरिएको थियो । तरकारी, खाद्यान्न र अति आवश्यक सामान खरिद गर्ने समय पनि छोट्याइएको छ । अब सोमबार, बुधबार र शनिबार बिहान ७ देखि ९ बजेमात्र किनमेलको समय तोकिएको छ । यसअघि प्रत्येक दिन बिहान दुई घण्टाको समय तोकिएको थियो । जिल्लाभित्र गुड्ने सबै प्रकारका सवारीसाधन र मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय र निर्माणसँग सम्बन्धित सबै काम जेठ ५ गते राति १२ बजेदेखि जेठ २० गते राति १२ बजेसम्मलाई रोक लगाइएको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ दफा ६ (३) क र संक्रामक रोग ऐन, २०२० दफा २ (१) बमोजिम जिल्लामा यस्ता कामकाजमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको प्रजिअ दीर्घनारायण पौडेलले बताए । अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई पनि जिल्लाभित्र मान्छे ओराल्न र चढाउन बन्देज लगाइएको उनले बताए । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ९ पालिकामा सोमबारसम्म ४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०७:१४